Ukusebenza kwaPresto Automation akuwona nje umsebenzi, kungumsebenzi weqiniso.
Isiko e-Presto Automation likhiqiza futhi liyaxhasa. Okusha - ngoba sinikela ngamathuluzi amahle nobuchwepheshe bamuva embonini ukuxhasa ukukhula nentuthuko yakho. Ukusekela - ngoba ukusebenza ePresto Automation kukuvumela ukuthi ulinganise umsebenzi wakho nempilo yakho yasekhaya.
Sakha futhi sithuthukise izinqubo zokukhiqiza ezisezingeni lomhlaba kwa-Presto Automation ngoba sinabantu abakhulu abenza konke kwenzeke. Futhi, izakhiwo zethu zesimanje, ezihlanzekile, nezisebenza kahle zisike ngaphezu kwalokhu okulindelwe imvelo endaweni yokukhiqiza.
Ngabe ucabanga ngomsebenzi emkhakheni wokukhiqiza? Sicela uthathe isikhashana ukubheka uhlu lwethu lwezikhundla ezitholakalayo ngezansi, futhi uzizwe ukhululekile ukufaka isicelo uma ucabanga ukuthi uhlangabezana nezimfuneko zomsebenzi.
I-Presto Automation umqashi olinganayo wamathuba, onikelayo isinxephezelo sokuncintisana, ukuqashwa okuzinzile, izinzuzo, kanye nokutholakala komshwalense wezenhlalo womuntu ofanelekile.
Unjiniyela Wokulawula Ugesi
Igama Lenkampani: I-Presto Automation
Uhlobo lomsebenzi: Isikhathi esigcwele
Lesi sikhundla sinesibopho sokuhlinzeka ngosizo lobuchwepheshe kunqubo yethu yokukhiqiza ngokusebenzisa ukuxazululwa kwemishini yokulungisa inkinga nokulungisa. Izinhlelo zokufaka kepha ezingakhawulelwe ezinhlelweni zokushisa, imishini yokubumba, imishini yokukhipha ingcindezi ephansi namahhavini enqubo. Amasistimu azofaka ama-hydraulic, i-pneumatics, izinhlelo eziqhutshwa yizimoto, kanye nezinto eziyisisekelo zikagesi. Ngokwengeziwe, lesi sikhundla sizoba nesibopho sokwenza ukulungiswa okuncane kumathuluzi okusakaza isikhunta nezinto. Kuzodingeka ukuthi kufundwe futhi kuqondwe amapulani, amabhukwana, kanye nezincazelo zobunjiniyela eziphathelene nokusebenza nokusebenza kohlelo ngalunye.
● Funda, uqonde futhi ulandele ukuphrinta kobunjiniyela, nemibhalo yokufeza ukuhlangana, ukugcinwa noma ukulungiswa kwezingxenye nemishini
● Yiba nolwazi namakhono wokugcina nokulungisa amathuluzi nezakhi zamathuluzi ngaphakathi kokucacisiwe kokuklanywa
● Gcina futhi ulungise izinto ezinjenge-hydraulic, i-pneumatics, izinjini eziqhutshwa izinjini, nezinto zikagesi eziyisisekelo
● Imishini yokuhlola nokuxazulula inkinga ukuqinisekisa ukusebenza kahle
● Siza ekugcineni izinga eligculisayo lekhwalithi nokusebenza kahle kuzinto ezikhiqizwayo
● Yenza yonke eminye imisebenzi, njengoba wabelwe
● Ungazitholela izingcingo zesikhathi esingeziwe nangemva kwamahora
● Isimo sengqondo esihle nomdlali weqembu
● Iminyaka engu-3-5 isipiliyoni sakamuva sokugcinwa nokulungiswa kwemishini nezinhlelo zemishini nokusetshenziswa kwemishini
● Okuhlangenwe nakho ngokuhlangana komshini okuyisisekelo, ukusethwa kwamathuluzi nokuxazulula inkinga
● Ulwazi ngemishini eyisisekelo yezingxenye ezisebenzisa izigayo, umshini wokuprakthiza, imishini yokugwedla kanye nezigayo ezingaphezulu, njll.
● Amandla ayisisekelo okufunda nokutolika imidwebo eluhlaza okwesibhakabhaka, imidwebo kanye nemidwebo yobunjiniyela
● Ulwazi lwama-hydraulic, i-pneumatics molding tooling kanye nezinto eziyisisekelo zikagesi
● Kumele ube namathuluzi wakho
● Ukwazi ukwenza umsebenzi ekukhiqizeni nasekuhlanganiseni izitshalo
● Ukuma njalo, ukuphakamisa, nokuhamba ezindaweni ezahlukahlukene, kubanda kuze kushise.
Ulwazi oluthile, amalayisense, izitifiketi, njll.:
● I-GED noma iDiploma Yesikole Esiphezulu Iyadingeka
● Ukuqedwa kohlelo lokufundela umsebenzi noma isikole sokuhweba kubuchwepheshe bemishini noma okufanayo
● Inhlanganisela elinganayo yemfundo nesipiliyoni
Mayelana ne-Presto Automation
● Singumqashi wamathuba alinganayo (EOE)
● Sidinga ukuhlolwa okusha kokuqashwa kwezidakamizwa notshwala
● Sidinga ukuhlolwa kwangaphambi kokuqashwa nokubuyiselwa emuva komhlaba
● Isinxephezelo sokuncintisana, ukuqashwa ngezinzuzo
I-Presto Automation ifuna Uchwepheshe Wokulawula Ugesi, obhekele ukwakha nokwakha amasistimu wokulawula kanye nokugcina / ukuxazulula ukukhiqizwa kwama-slide amaningi nemishini yokuhlanganisa.
Lesi isikhundla sokushintsha ebusuku - izinsuku ezinhlanu, i-MF, amahora we-Nightshift azonqunywa.
● Yakha futhi uthuthukise imishini yokuzenzekelayo yamazinga ahlukahlukene obunzima
● Gcina imisebenzi yezokuphepha entweni entsha neyamanje
● Ukujwayela uhlelo lokulawula ukunyakaza nokuthuthukiswa kwe-HMI
● Ukuxazulula inkinga kagesi
● Amakhono entambo
● Unekhono lokulandela nokufunda uhlelo lukagesi
● Ulwazi lwama-motors ezigaba ezintathu, ama-frequency speed drives, nezilawuli
● Ulwazi lwama-servo motors kanye nama-stepper motors
● Ukwakhiwa kukagesi nokwakhiwa kwezinhlelo zokulawula okuzenzakalelayo
● Ulwazi lwama-magnetic, ultrasonic, capacitive, ne-fiber optic sensors
● Ulwazi lwezilawuli zokuphepha kufaka phakathi amakhethini alula kanye nama-laser area scanner
● Ukwazi ukuxazulula inkinga imishini ezenzakalelayo nokulawula amasistimu
● Ulwazi lwezinhlelo ze-PLC
● Ulwazi lwezinhlelo ze-HMI
● Ulwazi lokwakhiwa kwe-ECAD
● Ukuqonda okuyisisekelo kwe-pneumatics ne-hydraulic
● Okuhlangenwe nakho kwakamuva kweminyaka engu-5 ekuthuthukisweni / ekuhlelweni / ekwenziweni kwezilawuli zikagesi
● Ukwazi ukwenza umsebenzi ezitshalweni zomhlangano
● Ukuma njalo, ukuphakamisa nokuhamba
● I-BS ku-Electrical Engineering noma enye idigri ehlobene nayo iyadingeka
● Sidinga ukuhlolwa kwangaphambi kokuqashwa nokwasemuva
● Isinxephezelo sokuncintisana, ukuqashwa okuvikelekile nezinzuzo